पूर्वसचिव कार्कीपत्नी हत्या प्रकरणः ‘मालिक्नी’को हत्यापछि किन गरे विजयले आत्महत्या ? - Gokarna News from Nepal
पूर्वसचिव कार्कीपत्नी हत्या प्रकरणः ‘मालिक्नी’को हत्यापछि किन गरे विजयले आत्महत्या ?
काठमाडौं– ललितपुरको सानेपामा गत माघ २७ गते पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको हत्या र सोही घरमा काम गर्ने विजय चौधरीको आत्महत्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखे पनि अझै रहस्य पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
घटनाको एक हप्तासम्म पनि कार्कीको हत्या र चौधरीको आत्महत्याको कारण रहस्मय नै छ । दुवै जनाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरीको हातमा पुगे पनि घटना रहस्यमय भएकाले प्रहरीलाई केस सल्टाउन मुस्किल परेको छ ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टमा कार्कीको मृत्युको कारण स्ट्रांगुलेसन (घाँटी थिचिएका कारण) भएको उल्लेख छ । यस्तै चौधरीको मृत्यु पनि झुण्डिएकै कारण भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ ।
कार्कीको हत्यापछि चौधरीले आत्महत्या गरेको स्पष्ट भइसके पनि घटना हुनुको पछाडिको कारण पहिल्याउने तर्फ प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रीत गरिएको छ । तर, पनि घटनाको कारण अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । चौधरीले ‘मालिक्नी’ मुनाको हत्यापछि आत्महत्या गरेको प्रहरीले सजिलै भनिरहेको छ । तर, यस्तो अपराधको कारणबारे चाहिँ प्रहरीले पनि केही बताउन सकेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार कहीँ न कहीँ उनीहरुबीच द्वन्द्व भएको हुनसक्छ । ७ वर्ष कार्कीको घरमा परिवारको सदस्यजस्तो भएर बसेका विजयले के कारणले आफ्नै मालिक्नीको हत्या गरे त्यसै भन्न नसकिने महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेकप्रसाद राई बताउँछन् ।
‘चौधरीलाई चिन्ने छिमेकीहरुलाई पनि सोधपुछ गरिरहेका छौँ,’ एसएसपी राईले भने, ‘घटनास्थलमा भेटिएका सबै ‘दशी’ परीक्षणको लागि पठाएका छौं । केही दिनमा रिपोर्ट आउला ।’
मुना र विजयले चलाउने गरेको मोबाइल अहिले फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणको क्रममा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ । त्यसैबाट हत्याको रहस्य पत्ता लगाउने प्रयासमा प्रहरी छ । अर्जुन कार्कीका गाडी चालक नुवाकोटका दीपेन्द्र डंगोल, उनको घरमा काम गर्ने महिला मीना कोइराला र घटना घटेको दिन सोमबार कार्की निवासमा गएका प्लम्बर रमेश कार्कीसँग पनि सोधपुछ भइसकेको एसएसपी राईको भनाइ थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आत्महत्या गर्नुअघि प्रायले सुसाइड नोट लेख्ने गरेको पाइन्थ्यो । घटनास्थल पुग्दा पूर्वसचिव कार्कीकी ४९ वर्षीया श्रीमती भान्साकोठामा रगताम्य अवस्था अचेत फेला परेकी थिइन् भने कामदार दाङ, लमहीका २२ वर्षीय चौधरी भने घाँटीमा हरियो नाइलनको डोरी कसिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए ।
चौधरीको शव परिवारले दाङमै लगेर अन्तिम संस्कार गरिसकेको छ भने मुनाको पनि परिवारले अन्तिम दाहसंस्कार गरिसकेको छ ।